Isikhwama semikhwama sekhompyutha
Ucwaningo emakethe yamaphakethe ekhompyutha enamabhuku
Imakethe yeLaptop Bag ifundwe kabanzi ngababhali balo mbiko ngokugxila okukhulu ekuthengisweni kwendawo yabathengisi, ukunwetshwa kwesifunda, ukuhola kwezigaba, izindlela ezikhuphukayo namathuba amqoka, nezinye izifundo ezibalulekile. Umbiko ugcizelela izinto ezinamandla ezandisa ...
"Ukuhamba" kunencazelo ehlukile
Kuwo wonke umuntu, "ukuhamba" kunencazelo ehlukile. Ezinganeni ezingakhathali, ukuhamba kungadla isidlo sasemini esimnandi esenziwe ngumama uthando, futhi singadlala sijabule nabangane, empeleni yikho okujabulisa kakhulu. Kubo, incazelo yokuhamba kungenzeka kube “ukudlala” nokuthi “yidla”! F ...
Ungakugcina kanjani uphephile lapho uthenga ukudla
Njengodokotela wegciwane lokudla, ngizwa imibuzo eminingi evela kubantu ngengozi ye-coronavirus ezitolo zokudla nokuthi ungahlala kanjani uphephile ngenkathi uthenga ukudla phakathi nalolu bhubhane. Nazi izimpendulo zemibuzo evamile. Okuthinta emashalofini okudla kuyindawo engakhathazi ukwedlula ukuthi ngubani ophefumulayo ...
© Copyright - 2010-2020: Wonke Amalungelo Agodliwe. ,